Gịnị Mmega nwere ike ime ka ahụ gị - Isimbido
Home gta casino games
in AKUKO UWA, KA ESI EBI NDU
Mmega bụ otu isi ihe ndị si ewere dị ka ụzọ ndụ na-eweta ezi ahụ ike. Ma anyị bụ ndị a na-agwa gị isi ga-iju gị.
Ime mmega ọtụtụ ugboro n’izu bụ ụzọ kasị mma na-uche nkọ ma ọ bụrụ na ị na-na na n’elu 50, nnyocha na-atụ aro.
Na-eche echiche na ebe nchekwa nkà ndị kasị mma mgbe ndị mmadụ gosipụtara obi na uru ahụ na a mgbe niile, a nyochaa nke 39 ọmụmụ hụrụ.
Nke a nọgidere na ezi na ndị na-ama gosiri ihe ịrịba ama nke cognitive ojuju.
Na-elu mmega mgbe ọ bụla afọ bụ bara uru maka obi ma ahụ, na Australian na-eme nnyocha kwuru.
Omume dị otú ahụ dị ka T’ai Chi na-atụ aro ka ndị mmadụ afọ 50 na-enweghị ike jikwaa ndị ọzọ ihe ịma aka iche nke omumu, ọmụmụ na British Journal of Sports Medicine kwuru.
READ ALSO: PROVERB: Mmetụta nke oge on Anyị
Brain agbam ume
Emega ahụ dịwo mara iji belata ihe ize ndụ nke a ọnụ ọgụgụ nke ọrịa, gụnyere ụdị-2-arịa ọrịa shuga na ụfọdụ ọrịa cancer, na ọ na-eche na-ekere òkè igbochi ụbụrụ si eke ojuju ka anyị tinye n’etiti afọ.
Ozizi bụ na site na ihe omumu nke ụbụrụ na-enweta a ukwuu ọkọnọ nke ọbara, oxygen na nri na mbo mbuli ya ike nakwa dị ka a ibu hormone nke na-enyere guzobe ọhụrụ akwara ozi na njikọ.
Na nke a analysis of gara aga ọmụmụ, na-eme nnyocha si University of Canberra anya na mmetụta nke ọ dịkarịa ala izu anọ nke ahaziri mmega ahụ na ụbụrụ nke okenye.
Na a dịgasị iche iche nke ụbụrụ ule, ha hụrụ na-egosi nke mmega rụọ cognitive ikike, dị ka echiche, na-agụ, na-amụta ma na-atụgharị, mgbe muscle ọzụzụ – ka ihe atụ, iji igwe – a dị ịrịba ama mmetụta na ebe nchekwa na ụbụrụ nwere ikike na-eme atụmatụ na hazie, a na-akpọ onyeisi ọrụ.
Joe Northey, ọmụmụ na-ede akwụkwọ na-eme nchọpụta si Research Institute maka Sport na-emega na Canberra, kwuru, sị Nchoputa na n’igwa iji nwee ma ụdị mmega na-kenyere ka melite ụbụrụ ahụ ike na n’elu-50s.
“Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eme mmega naanị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’izu e nwere ndị ka oganihu cognitive ọrụ, ma mgbanwe ndị mma na ihe omumu e mere,” o kwuru.
READ: Ị Ga-ekwenyerịrị Ronaldo hapụrụ Real Madrid ezinụlọ
O kwuru na ndị mmadụ kwesịrị-enwe ike jide a mkparịta ụka mgbe na-eme mmega.
NHS ụkpụrụ nduzi nwere ike ikwu na ndị toro eto na-eme ọ dịkarịa ala 150 nkeji nke na-agafeghị oke aerobic ọrụ ọ bụla izu ma na-enwe ndị bụ isi na uru abụọ ma ọ bụ karịa ụbọchị n’izu.
Arọ shopping bags
Dr Justin Varney, edu ndú maka okenye ahụ ike na ọdịmma na Public Health England, kwuru, sị ọ bụla ọrụ ahụ bụ ihe ọma n’ihi na ụbụrụ na aru.
“Ebe ọ bụla 10 nkeji nke mmega na-enye uru ụfọdụ, na-eme 150 nkeji a izu egbupu Ohere nke ịda mbà n’obi na mgbaka site a-atọ, na boosts echiche ike mgbe ọ bụla afọ.
“Ime ma aerobic na-ewusi ike omume na-eduga ná a ukwuu iche iche nke ike uru.”
N’ike mmụọ nsọ na-agbalị ụfọdụ omumu?
READ: Ambode Wont’t Stop Until He Destroys Computer Village
An 84 afọ nwoke na-eme yoga na a osimiri na Japan
Chọpụta otú ga-esi n’ime dị nnọọ banyere ihe ọ bụla egwuregwu (na mma eme) na BBC Ina n’ike mmụọ nsọ pụrụ iche na-eduzi
O kwuru ịgba ígwè ma ọ bụ na-eje ije na-arụ ọrụ nwere ike gua dị aerobic ọrụ na iburu shopping akpa bụ otu ihe atụ nke a ọma ike mmega.
Dr Dean Burnett, lecturer na neuroscience na uche n’ụlọ Cardiff University, kwuru, sị ọmụmụ nyere a ghọtakwuo otú omumu emetụta ụbụrụ – ma a ka nwere nsogbu.
“Ọ pụrụ iduga ịmanye maka 50-gbakwunyere afọ otu na-egosipụta ihe iji nọrọ uche ike, nke bụ ndụmọdụ dị mma ma na-eleghara eziokwu ahụ bụ na dị ka anyị na-nká ọ bụ esiwanye ike emega ahụ, dị ka ahụ anyị na- nanị obere ike nke ya, “ka o kwuru.
“Ọzụzụ nke ahụ bụ otu mmewere nke mma ụbụrụ ịrụ ọrụ, ma ọ bụghị dum akụkọ.”
Nakwa dị ka na-anọ emega ahụ mgbe, Dr David Reynolds, Alzheimer Research UK, kwuru na ọ bụ dịkwa mkpa anya mgbe ụbụrụ anyị site na-anọ gara gara n’uche, na-eri a kwesịrị isi nri, na-aṅụ naanị na imeru ihe n’ókè na-adịghị aṅụ sịga.
Ị Ga-ekwenyerịrị Ronaldo hapụrụ Real Madrid ezinụlọ
Tribute From Goodluck Jonathan To Yar’Adua
Tribute From Goodluck Jonathan To Yar'Adua